ချင်းပြည်သူများက ဆေးရုံထက် ဆရာဝန်နှင့် ဆေးဝါး ပိုမိုလိုအပ်ဟု စစ်ထောက်ချုပ်ထံ တင်ပြ | Home
May 2, 2012 by khonumthungburmese ၁၃ မေလ ၂၀၁၀၊ မကြာသေးခင်က ချင်းပြည်နယ်သို. လူကြီးခရီးစဉ်ဖြင့်ရောက်ရှိလာသော စစ်ထောက်ချူပ် ဒုတိယဗိုလ်ချူပ်ကြီး အုန်းမြင့်ထံသို. ချင်းပြည် သူများက ပြည်သူ.ဆေးရုံထက် ဆရာဝန် နှင့် ဆေးဝါးများပိုမိုလိုအပ်ကြောင်းတင်ပြခဲ့ကြသည်ဟု သိရသည်။